I-Cottage yodwa kwihlathi elihle laseSmåland.
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCharlotte
Wamkelekile eVilla Enekulla, icottage entle nethe cwaka eSmåland.
Nokuba ukhangela ntoni na ngeholide ezolileyo, ukuhamba okumnandi kwindawo enomtsalane yeSmåland ekungqongileyo, imisebenzi eyonwabisayo yabantwana okanye ukuphumla nje okuzolileyo egadini, yindawo onokuthi uye kuyo le! Rhoqo ngamaxesha ama-4 anomtsalane, iVilla Enekulla ngamava akhethekileyo ngalo lonke ixesha lonyaka.
I-Villa Enekulla ikwihlathi, abamelwane kuphela ziintaka kunye noonomatse abahlala bedlala egadini.
- Indlu i-64 square metres iyonke.
- Akukho ndlela ixakekileyo kufutshane.
- Akukho bamelwane, uwedwa ngokupheleleyo ehlathini.
- Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.
- Umatshini wokuhlamba, isepha kunye nesomisi (simahla).
- Indlu yangasese kunye neshawari.
- Ubushushu bombane kuwo onke amagumbi (simahla)
- Amanzi abandayo nashushu kwimibhobho (simahla)
- Umdlali we-LP kunye nezinye ii-LPs zokudlala.
- iinkuni kwindawo yeenkuni (simahla)
- Isitulo esiphakamileyo sabantwana, kunye nesitulo esiphezulu sabantwana abasafundayo, ukutshintsha umqamelo.
- Ucingo lokhuseleko lomnyango wekhitshi kunye ne-terrance. (Ayifakwanga, kodwa kulula ukuyifaka. Iingcingo zibekwe emva kwebhentshi kwi-terrance nakwi-woodshed)
- I-Trampoline (ehlotyeni), i-swings, i-sandpit kunye namathoyizi egadini.
- Igrill. (Yiza neyakho ingoma)
-Iithoyi ezahlukeneyo, imidlalo yangaphakathi nangaphandle iyafumaneka.
Ibekwe kufutshane (iikhilomitha ezi-3) kubantwana iMidingsbråte indawo yokuhlambela e-Mien Lake, esemazantsi eSweden elelona chibi lokuqubha licocekileyo, nangona indawo ingaxinana kakhulu.
Kulo mmandla (ngaphantsi kweyure yokuqhuba) uya kufumana kwakhona iMoose Safari, ipaki yamanzi yangaphakathi, ukuloba eMien Lake (elinye lamachibi anzulu kumazantsi eSweden), iphenyane kunye nokuma iphini e-Åsnen, Åsnen nature reserve, Ire nature reserve. , “Laxens Hus” indawo yogcino lwendalo, iRönneby Brunnspark, Rönneby ipaki yamanzi yasehlotyeni yangaphandle (enamanzi ashushu) iVångabacken skiing resort, Korrö Indawo yokutyela kunye nesixeko sobugcisa / sobugcisa, ukukhwela amahashe 'Loppis' (iifleamarkets), Laxasand lake beach.
Ngaphakathi kweyure enye okanye ezi-2 zokuqhuba uya kufikelela eRandiz Lekland (indawo yokudlala yangaphakathi yabantwana) i-Astrid Lindgreen World, Öland, High Chaparral western park, Hanaslöv skiing resort, Växjö city, Karlshamn city and Kosta Outlet.
Siyafumaneka kwiselfowuni yethu nangemiyalezo yakwa-Airbnb.
Iilwimi: Dansk, English, Español, Svenska